UKUBHALWA kukaMartin Vrijland ngokusindayo ekuhlaseleni ebomini bakhe, kodwa akukho nabezindaba ezichaza ngayo: uMartin Vrijland
UKUBHALWA kukaMartin Vrijland ngokusindayo ukuhlaselwa ebomini bakhe, kodwa akukho mithombo yeendaba yokuyibika
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Juni 2018	• 6 Comments
Kwimihla yakutshanje, ilizwe liye latshitshiswa ngokuhlaselwa "kwi-press free and independent" "(njengoko uMarko Rutte abiza), ngokumisa ubundlobongela, umbuzo wokuba wawungadalwa yedwa. Kufuneka uthathe igama elithi 'ukuzidalula' ngokukhululekile, kuba unako, umzekelo, ugxininisa iqela elinoyikrakra efana no-IS, uhlawule kwaye ukhule ukuze likhule libe yintlangano yokubulala. Akufanele sikhankanye umgaqo ofanayo kwimeko yolwaphulo-mthetho. Ukuba kukho ukuhlaselwa okunjalo, siva ngokukhawuleza ukuba kukho ukunqongophala kwabasebenzi kwi-NFI, isebe lophando lolwaphulo-mthetho kwaye uyalibiza igama. Kufuneka kubekho imali eninzi yokukhusela ukhuseleko, amapolisa kunye ne-judicial and you can wonder whether this is not set up (plus ezinye iibhobho ezimbini) kwi 'Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo'umdlalo. Ukususela ngomhla wokuba isayitile iqale ukubhala, uye waxatyiswa yizo zonke iintlobo zokuhlaselwa kwi-intanethi. "Ukuhlaselwa" kweveki eveleleyo kwangoLwesine ebusuku ePanorama kwaye ngezolo e-Telegraaf isakhiwo sinika ingcamango yokuba yinto ebalulekileyo kwimvelo, kodwa ukuhlaselwa kwenene kwinkululeko ye-press kwaqala ngokuphazamisa abashicilelweyo.
Amaphulo ama-Blackening kunye neendawo ezenzelwe ukuphazamisa idumela lomntu zikhuthazwa ngamandla kwiGoogle nakwi-Facebook kwaye kukho nakubungozi obuninzi bokufa. Kwi-1 imeko enjalo, ukusabela kokuqala kwi-agent engakwaziyo kukuba ndifuna ukukhuselwa, kodwa emva kokufumana imiyalelo, kwakungekho mfuneko. Ngxelo epheleleyo kakhulu kwiiwebhusayithi ezijongene nazo zonke ezi zintetho kunye nokuhlambalaza, akukho nto iyenzeka nanamhla. Igunya lokuqhuba umthombo wenkcaso enkulu kunye nokunyundela liye laguqulelwa libe ngumfazi kwaye ngoko kubonakala ngathi iyakwazi ngokusemthethweni ukuphuma kumdaniso. Lo mntu waboniswa ngokupapashwa kwakhe kwiphondo ukuba wayengumqeshwa welizwe. Kuye kwaboniswa ngokucacileyo ukuba isayiniwe ihlaselwe yinkxalabo yombuso. Kukho ukuhlaselwa ebomini bam ngohlobo lwe-online slabel and defamation, oluye lwaphazamisa imeko yam yoluntu kunye nemali. Oku kuthetha ukuba awuyi kuphinda ufumane umsebenzi oqhelekileyo kwakhona kwaye unokuziqhelisa kwaye uza kusayinwa ubomi. 1x Googling kunye nomqeshi wakho, umthengi okanye umthengi uya kulahla. Oko kukuhlaselwa kuphela simahla en ezizimeleyo cinezela kwaye siya kuqhubeka siva ngoMark Rutte! Yenza kucacise ikati ukuba abeendaba eNetherlands bakhululekile kwaye bazimeleyo! Ukufunda eli nqaku khangela nje ukuba isebenza njani.
Ukuba uyazi ngobunzima beemeko en Ukuba uqaphela indlela umculi nombhali okhululekileyo owonakaliswa kwimeko yombuso, mhlawumbi ukuqonda kuya kuza kum, ukuba umshicileli okhululekileyo kunye ozimeleyo akufanele abe nethuba eNetherlands. Ukhankanywe ngeiglavu ezichasene kwaye zifihliwe ngamacandelo okhuseleko olumnxeba onikezela ngeyona ndlela entsha entsha yeendaba. Ngoko kubalulekile ukuba ujoyine le sayithi okanye uchaze inkxaso yakho ngokusebenzisa umnikelo. Ngaphandle kwenkxaso yakho, inkululeko yenkxalabo kunye nokuzimela kwangempela iye yacinywa. Kwaye ekubeni ndithintele nayiphi na ingeniso (zama ukuzama ukufumana umsebenzi xa igama lakho livela kwi-Google phezulu kunye nokunyelisa nokunyundela), yodwa inketho ondixhasayo kukuqhubeka. Ukuba uPaul Jansen we-Telegraaf, oyena-propagandist oyintloko, unokuthi ngesibindi 'Siya kuqhuba!"kungumphumo wokuba uyazi ukuba yena kunye neNtetho yeTelgraaf ayikho nengozi. Badlala ihlabathi ngobuqhetseba nokukhohlisa. Ukuba umntu ohlaselwe nguye ngokuqinisekileyo uthi:Ndiya phambili!", Leyo ibali ehluke ngokupheleleyo kunomntu owenza nje umboniso wekhamera ngemitha embalwa yomvuzo.
Ngelishwa, kunomdla omncinci wobulungu kunye namalungu ambalwa ayaphuma emva kwento nganye ebalulekileyo. Ukutshintsha kufuneka kube njalo. Ndiyabukela ngenkxaso yakho kunye nethemba eliqinisekileyo lokuba unquma ukuba ilungu! Unokuba ilungu apha okanye wenze umnikelo wesikhathi esisodwa apha.
Umsasazo kunye nokuhlambalaza kukaMartin Vrijland uJeren Hoogeweij ngoku kuthiwa nguNahogeweij
U-Arnold Karskens umbhali we-TPO u-AK-74, intatheli yemfazwe kunye nosihlalo weziseko zolwaphulo-mthetho lwezemfazwe wafaka isikhalazo malunga neengxelo ezikhohlisayo ze-NOS, ngelixa liyiyo intatheli yeendaba
tags: hlaselwa, ubuxoki obenziwe ngamasibomu, ukunyelisa, UMark Rutte, UMartin Vrijland, eendaba, ezizimeleyo, Panorama, UPaul Jansen, abantu, lihlazo, telegraph, simahla
Dennis wabhala wathi:
27 Juni 2018 kwi-21: 28
Ewe, ungakhathazeki ngokuthi "uNahomi" kwakhona ngenxa yokuziphatha kwakhe kwangaphambili, uye wafa kwaye uyagula, uthi unomdlavuza, kodwa enyanisweni akazange abe kufuphi naye, urhulumente, apho wenza konke okusemandleni akhe iminyaka kwaye wazama ukuthatha abantu, ukuba urhulumente uyamvumela ukuba aphule ngokukhawuleza, kungekudala baya kumphosa esitratweni: https://www.ad.nl/rotterdam/doodzieke-schiedamse-klaagt-gemeente-aan~a5fe150a/
27 Juni 2018 kwi-23: 45
Ndineengcamango zam kweli bali?
28 Juni 2018 kwi-16: 15
Ngokuqinisekileyo, ndixhalabele ngokungabikho kwenkxaso kubafundi ... kukuhlazo ukuba abantu abambalwa bazimisele ukushiya ubhiya be-1 ngenyanga ngenxaso ethile kuyo yonke imizamo yam. Oko akukhuthazi ngokwenene.
29 Juni 2018 kwi-05: 48
UDennis, Nangona kunjalo, ufumene ummeli omkhulu wepro bono. Akuyena wokuqala, kodwa uRammerstein ngokwakhe wenza ishishini.
Jeez, umhlaza emva kwentliziyo yakhe? Oko kwenzeka oko ndifunayo ngaphambili. I-Weird.
29 Juni 2018 kwi-10: 13
Ngoko akakwazi ukuhlawula iindleko zonyango, kodwa i-€ 1500 / iyure u-Oscar Hammerstein unakho?
Okanye ngaba umzamo wokubamba ingqalelo kwi-ajenda ye-transgender kwaye, ngexesha elifanayo, ukudala ingcamango yokuba akasebenzeli uhulumeni, kodwa njengomntu oqeshwe ngokuzimeleyo (eso sikhokhelo sase sisebenzise ngelo xesha, ngendlela).
30 Juni 2018 kwi-07: 07
Into enjalo. Nangona i-ofisi yeHammerstein iphinda iqhube i-business b bono, ndiyakholwa, kodwa ke kufuneka uqinisekise ukuba unemali engenayo encinci kunyaka ophelileyo, ndacinga. Yaye loo ntlawulo engayi kuba yinkinga. Ukuba ndandidinga i-pro bono ummeli, ndisoloko ndifumana amaqhinga avela kuloo gqwethi. Kungakhathaliseki ukuba yintoni inzulu kwaye inomdla kwimeko. NoJan Vlug, Hammerstein okanye uBrmetmetje kaClair. Ngoko ke ndade ndidlala ngegama elimangalisayo njengoDe Milliano, kodwa ke ndafumana udliwano-ndlebe noDamam, kodwa indoda yavela esihlalweni ebonakala ukuba yayithande iipayipi ze-OvJwild emva kwesihlalo, okanye isidlo sasemini kunye naye. Ewe, njengowommeli wokuqala ufuna ukuya kwinqanaba eliphezulu.
« Ukuhlasela kweTelgraaf kwakungenakwenzeka ngaphandle kokuba izithintelo zivulekile
Ngaba kukho 'ukudibanisa' kwimicimbi emikhulu yezemidlalo njengeNdebe yeHlabathi kunye neFomula 1? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.326.332